Vol. 17 MAY, 1913. Nha. 2
MUMWE anofarira basa rekufungidzira, asi haawanzo kufunga nezvazvo kuti azive kuti chii, mashandiro acho, zvinhu zvipi zvinoshandiswa, zvii nzira uye mhedzisiro yebasa, uye chii chaizvo chinangwa chekufungidzira . Kufanana nemamwe mazwi, senge zano, pfungwa, pfungwa, kufungidzira zvinowanzoshandiswa zvisina tsarukano kana pasina dudziro chaiyo. Vanhu vanotaura zvekufungidzira nerumbidzo, sechiverengero kana hunhu hwevakuru varume avo kugona kwavo uye masimba avo akaumba huwandu hwendudzi nenyika; uye vanhu vamwe chete ivo vachataura nezvazvo sehunhu hwevamwe vasingaite, vane vagidhi mafaro uye vasina simba pfungwa; kuti zviratidzo zvezvakadai hazvibatsiri, zviroto zvavo hazvitongopfeki, ivo vanotarisira zvisingamboitike; uye, ivo vakatariswa netsitsi kana kuzvidzwa.
Kufungidzira kucharamba kuchitsikisa destinies. Ichatakura imwe kukwira kumusoro uye vamwe pakadzika. Inogona kugadzira kana kusaita varume.
Kufungidzira haisi iyo isinganzwisisike nebula yezviroto, fancies, hallucinations, fungidziro, kunyepedzera, kusava nebasa. Kufungidzira kunoita zvinhu. Zvinhu zvinoitwa mukufungidzira. Izvo zvinoitwa mukufungidzira ndezvechokwadi kune iye anozviita sezvakaita zvigadzirwa zvekufungidzira kana zvichisungirwa kushandiswa kwemuviri.
Izvo ndozvazviri kumurume zvaanoziva iye. Munhu anozoziva zvinhu nekuita kuti zviwiswe paari kana kuburikidza nekutendeudzira kune izvo kwavari. Haanzwisisi izvo zvaanoziva, kudzamara apedza kutarisisa nekuedza kufunga nezvazvo nekuzvinzwisisa. Paanofunga uye nekuyedza kuzvinzwisisa, kufungidzira kunozozvizarurira mafomu matsva kwaari; iye achaona zvinoreva zvitsva mune zvekare mafomu; achadzidza kugadzira mafomu; uye iye achanzwisisa uye anotarisira mberi kwekupedzisira kwekufungidzira, mukufumura uye kugadzira kwechimiro.
Kufungidzira hakutsamiri panguva kana nzvimbo, kunyangwe dzimwe nguva chimiro chemufananidzo chiri mumunhu chakasununguka uye chakabatikana kupfuura pane vamwe, uye kune nzvimbo dzinokodzera kupfuura vamwe kubasa, kwete kutamba, kwekufungidzira. Zvinoenderana nemafungiro, hasha, hunhu, kukura kwemunhu. Nguva nenzvimbo zvine chekuita nemuroti uyo anoshuvira kuti zvinhu zvingaitike uye akamirira mikana nemweya, asi iye anofungidzira anogadzira mikana, anotyaira zvinobva kwaari, zvinoita kuti zvinhu zviitike. Naiye, kufungidzira kunoshanda chero nguva uye chero nzvimbo.
Vaya vanofungidzira vangave vakaipa kana kuti vakarerekera, vanongofunga kana kushandira, vanorota kana vanofungidzira. Mifungo yemuroti inokurudzirwa nemanzwi uye nezvinhu zvavo; iyo fungidziro yemafungidziro inogona kunyanya kukonzerwa nemafungiro ake. Iye anorota anozvibata uye anongoita zvinhu, iye anofungidzira akanzwa uye akanaka. Iye anorota ndeuyo ane pfungwa, kuburikidza nemufananidzo wake wedhiziri, anoratidza kana kutora mafomu ezvinhu zvezvinhu zvekunzwa kana pfungwa, uye ndiani anopengeswa neizvi. Iye anofungidzira kana imaginator ndiye anounza nemufananidzo wake mufananidzo, chinhu muchimiro, anotungamirwa nemufungo wake, sekuziva kwake uye kwakatemwa nesimba rake rekuda. Pfungwa dzakakamuka uye manzwi anonzwisa tsitsi uye mafomu anokwezva iye ari kurota. Pfungwa dzake dzinovatevera uye anotamba navo muzvirukwa zvavo, kana kubatwa uye kubatwa navo, uye mufananidzo wake wemufananidzo unotyairirwa uye unomanikidzwa kuvapa kutaura pavanotungamira. Iye anofungidzira anokora chifananidzo chake chemifananidzo uye anovhara pfungwa dzake nekufunga zvakadzama kusvikira awana iye mafungiro ake. Sezvo mbeu inokandirwa muchibereko chepasi, saizvozvo pfungwa dzinopihwa kuchifananidzo chemifananidzo. Dzimwe pfungwa dzinodzingwa.
Kuzorora pakupedzisira paruzivo rwekupedzisira mupfungwa uye nesimba rekuda, iye anofungidzira anosimudzira chimiro chemufananidzo nemafungiro ake kusvikira basa rekufungidzira ratanga. Zvinoenderana neruzivo rwekupedzisira rwe imaginor uye nesimba rekuda, iyo pfungwa inotora hupenyu mune iyo chifananidzo. Manzwiro anobva adaidzwa kuti ashandiswe uye rimwe nerimwe rinoshanda mune basa rekufungidzira. Pfungwa yatora chimiro mukufungidzira, ndiyo iri pakati penzvimbo muboka kana mapoka emafomu, ayo anotora iwo mavara kubva kwairi uye ayo anofurira kusvikira basa rekufungidzira raitwa.
Kufunga kunoshanda sei kunoratidzwa mune nyaya yemunyori. Nekufunga, anoshandura mwenje wake wepfungwa pachinhu chaanoshuvira kuburitsa uye anomutswa nehukasha sezvaanofunga. Manzwiro ake haagone kumubatsira, ivo vanokanganisa uye vanovhiringidza. Nekuenderera mberi nekufunga iye anojekesa uye anotarisa kujekesa kwepfungwa yake kusvikira awana iwo musoro wepfungwa yake. Zvinogona kuuya mupfungwa dzake mupfungwa zvishoma nezvishoma kunge kunze kwemutoro unorema. Inogona kupenya yakazara zvayo semheni kana ruzha rwezuva. Izvi hazvisi zvekunzwa. Izvo izvi manzwi hazvigoni kubata. Ipapo chifananidzo chake chemifananidzo chiri kushanda, uye pfungwa dzake dzinoshingairira kupfekedza mavara anopihwa chimiro chake chemifananidzo. Izvo zvinhu zvepasirose kunze zvinoshandiswa mune kusvika pese pavanogona sevanoshanda seyakagadziriswa yechinyorwa munyika yake mukati. Sezvo mavara anowedzera kuva chimiro, pfungwa yega yega inobatsira nekuwedzera toni kana kufamba kana chimiro kana muviri. Zvese zvinoitwa vapenyu munzvimbo mavo zvakadanwa nemunyori nebasa rekufungidzira.
Kufungidzira kunogona kuitika kune wese munhu. Iine mamwe masimba uye masimba ekufungidzira akadzika kune diki diki; nevamwe vakagadziridzwa nenzira inoshamisa.
Simba rekufungidzira ndere: simba rekuda, simba rekufunga, simba rekuda, simba rekunzwisisa, simba rekuita. Kushuva ndiwo maitiro eichi nyonganiso, chakasimba, chinokwezva uye chisinga nzwisisike chepfungwa, chinoda kutaura uye kugutsikana kuburikidza nemanzwiro. Kufunga ndiko kutarisa kwechiedza chepfungwa pane imwe pfungwa yekufunga. Kuda kuita kunomanikidza, nekufunga, kwezve izvo izvo zvakasarudzwa kuti zviitwe. Sensing ndiko kuiswa kwezvinhu zvinogamuchirwa zvinogamuchirwa kuburikidza nemitezo yehungwaru kune humboo hwepfungwa. Kuita ndiko kuitwa kweizvo izvo zvido zvoga zvido zvo munhu kana chaanoda.
Aya masimba anobva pazivo iro iro pfungwa dzakambowana munguva yakapfuura. Pfungwa dzakakurumbira hadzina kururama, kuti hunyanzvi hwekufungidzira chipo chechisikigo, kuti masimba anoshandiswa mukufungidzira ndezvezvinhu zvakasikwa kana mhedzisiro yenhaka. Mashoko ekuti zvipo zvechisikirwo, kugara nhaka pamwe nekuzviratidza zvinongoreva izvo izvo zvakauya nekushanda kwemunhu. Unyanzvi uye simba rekufungidzira uye masimba anoshandiswa mukufungidzira ndiyo nhaka muhupenyu hwazvino hwechikamu cheizvo izvo murume akange awana nekuedza muhupenyu hwake hwekare. Avo vane simba shoma rekuti kana chishuvo chekufungidzira vaita kushoma kuita kuti vachiwane.
Kufungidzira kunogona kuvandudzwa. Avo vane zvishoma, vanogona kukura zvakawanda. Vaya vane zvakawanda vanogona kukura mamwe. Pfungwa dzinobatsira, asi kwete nzira mukukudziridza kwekufungidzira. Dzakakanganisika pfungwa dzinogona kuve nehurema zvinobatsira, asi hazvikwanise kudzivirira kushanda kwekufungidzira.
Kufungidzira kunowanikwa nechirango uye kurovedzera kwepfungwa pabasa rekufungidzira. Kuranga pfungwa yekufungidzira, sarudza chinyorwa chisinganzwisisike uye woita mukufunga nezvacho nguva nenguva kusvikira waonekwa uye unzwisiswa nepfungwa.
Mumwe anokudziridza kufungidzira kusvika pamwero waanoranga pfungwa nechinangwa. Tsika yemanzwiro inowedzera imwe yakasarudzika tsika pamhedzisiro yebasa rekufungidzira. Asi hunyanzvi mukufungidzira hwakadzika midzi mundangariro uye hunopfuuridzirwa kuenda kana kuburikidza nemanzwisisiro kuburikidza nehunyanzvi hwepfungwa hune chekuita nekufungidzira.
Kuti ipedziswe muhuwandu hwaJune